27.07.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“मीठे बच्चे– आफूमाथि आफैंले दया गर , बाबाले जुन श्रीमत दिनुहुन्छ त्यसमा चलिराख , बाबाको श्रीमत छ– प्यारा बच्चाहरू! समय खेर नफाल , सुल्टो कार्य गर।”
जो तकदिरवान बच्चाहरू छन्, उनीहरूको मुख्य धारणा कुनचाहिँ हुन्छ?
तकदिरवान बच्चाहरूले सबेरै-सबेरै उठेर बाबालाई धेरै प्यारले याद गर्छन्। बाबासँग मीठा-मीठा कुराकानी गर्छन्। कहिल्यै पनि आफैंमाथि निर्दयी बन्दैनन्। उनीहरूले सम्मान साथ पास हुने मेहनत गरेर स्वयंलाई राजाईको लायक बनाउँछन्।
बच्चाहरू बाबाको सामुन्ने बसेका छन् त्यसैले जानेका छन्– हाम्रो बेहदका बाबा हुनुहुन्छ र हामीलाई बेहदको सुख दिनको लागि श्रीमत दिइरहनु भएको छ। उहाँको लागि नै गायन गरिएको छ– रहमदिल, लिबरेटर... धेरै महिमा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– केवल महिमाको मात्र कुरा छैन। बाबाको त कर्तव्य हुन्छ बच्चाहरूलाई मत दिनु। बेहदका बाबाले पनि मत दिनुहुन्छ। बाबा उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ भने अवश्य उहाँको मत पनि उच्च नै हुनुपर्छ। मत लिने आत्मा हो, राम्रो वा नराम्रो आत्माले नै गर्छ। यस समयमा दुनियाँलाई रावणको मत मिल्छ। तिमीलाई मिल्छ रामको मत। रावणको मतले निर्दयी बनेर उल्टो काम गर्छन्। बाबाले सुल्टो काम गर्न मत दिनुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो कार्य आफैंमाथि दया गर्नु हो। तिमीले जानेका छौ– हामी आत्माहरू सतोप्रधान थियौं, धेरै सुखी थियौं। फेरि रावणको मत मिल्नाले तिमी तमोप्रधान बनेका छौ। अब फेरि बाबाले मत दिनुहुन्छ एक त बाबाको यादमा बस। अब आफूमाथि दया गर, यो मत दिनुहुन्छ। बाबाले दया गर्नुहुन्न। बाबाले त यस्तो-यस्तो गर भनेर श्रीमत दिनुहुन्छ। आफूमाथि आफैंले दया गर। आफूलाई आत्मा सम्झेर आफ्नो पतित-पावन बाबालाई याद गर्यौ भने तिमी पावन बन्छौ। बाबाले राय दिनुहुन्छ, तिमी पावन कसरी बन्छौ। बाबा नै पतितलाई पावन बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। उहाँले श्रीमत दिनुहुन्छ। यदि उहाँको मतमा चल्दैनौ भने आफूमाथि निर्दयी हुन्छौ। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ– प्यारा बच्चाहरू! समय खेर नफाल। यो पाठ पक्का गर– हामी आत्मा हौं। शरीर निर्वाहको लागि धन्दा आदि गर तर समय निकालेर युक्ति रच। काम गर्दा आत्माको बुद्धि बाबातर्फ हुनुपर्छ। जसरी प्रियतमा-प्रियतमले पनि काम त गर्छन् नि। दुवैले एक-अर्कालाई प्यार गर्छन्। यहाँ यस्तो छैन। तिमीले भक्तिमार्गमा पनि याद त गर्छौ। कतिले भन्छन् याद कसरी गर्ने? आत्मा परमात्माको रूप कस्तो छ जसलाई याद गर्न सकियोस्। किनकि भक्तिमार्गमा पनि गायन गरिन्छ– परमात्मा नाम-रूप भन्दा भिन्न हुनुहुन्छ। तर यस्तो होइन। भन्छन् पनि, भृकुटीको बीचमा आत्मा तारा जस्तै छ फेरि किन भन्छन्– आत्मा कस्तो छ, त्यसलाई देख्न सकिँदैन। त्यो त हो नै जान्नु पर्ने कुरा। आत्मालाई जान्नु पर्ने हुन्छ, परमात्मालाई पनि जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अति सूक्ष्म चीज छ। जुनकिरी भन्दा पनि महीन छ। शरीरबाट कसरी निस्किन्छ, थाहै हुँदैन। आत्मा छ, साक्षात्कार हुन्छ। आत्माको साक्षात्कार भएर के भयो त? त्यो त तारा जस्तै सूक्ष्म छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। जस्तो आत्मा, त्यस्तै परमात्मा पनि आत्मा नै हुनुहुन्छ। तर परमात्मालाई सुप्रीम सोल भनिन्छ। उहाँ जन्म-मरणमा आउनुहुन्न। आत्मालाई सुप्रीम तब भनिन्छ जब जन्म-मरण रहित हुन्छ। बाँकी मुक्तिधाममा त सबै पवित्र भएर जानु छ। तिनमा पनि नम्बरवार छन्, जसको हीरो-हीरोइनको पार्ट छ। आत्माहरू नम्बरवार त छन् नि। नाटकमा पनि कोही धेरै तलब खाने हुन्छन्, कोही कम खाने हुन्छन्। लक्ष्मी-नारायणको आत्मालाई मनुष्य आत्माहरूमा सबै भन्दा सुप्रीम भनिन्छ। बन्न त पवित्र सबै बन्छन् फेरि पनि नम्बरवार पार्ट छ। कोही महाराजा, कोही दासी, कोही प्रजा। तिमी कलाकार हौ। जानेका छौ– देवताहरू सबै नम्बरवार छन्। राम्रो पुरुषार्थ गर्यौ भने उच्च आत्मा बन्छौ, उच्च पद पाउँछौ। तिमीलाई स्मृति आएको छ– हामीले ८४ जन्म कसरी लियौं। अब बाबाको पासमा जानु छ। बच्चाहरूलाई यो खुशी पनि छ, नशा पनि छ। सबैले भन्छन् हामी लक्ष्मी-नारायण विश्वको मालिक बन्छौं। फेरि त्यस्तै पुरुषार्थ गर्नु पर्ने हुन्छ। पुरुषार्थ अनुसार नम्बरवार पद पाउँछन्। सबैलाई नम्बरवार पार्ट मिलेको छ। यो ड्रामा बनिबनाउ छ।
अहिले बाबाले तिमीलाई श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ। जसरी भए पनि बाबालाई याद गर्यौ भने विकर्म विनाश हुन्छ, अनि तिमी तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्छौ। शिरमाथि पापको बोझ त धेरै छ। त्यसलाई जसरी भए पनि यहाँ समाप्त गर्नु छ तब आत्मा पवित्र बन्छ। तमोप्रधान पनि तिमी आत्मा बनेका छौ भने सतोप्रधान पनि तिमी आत्मालाई नै बन्नु छ। यस समयमा सबै भन्दा विपन्न भारतवर्ष बनेको छ। यो खेल नै यहाँ हुन्छ। बाँकी उनीहरू त केवल धर्म स्थापन गर्न आउँछन्। पुनर्जन्म लिंदा-लिंदा पछि गएर सबै तमोप्रधान बन्छन्। स्वर्गको मालिक तिमी बन्छौ। जानेका छौ– भारत धेरै उच्च देश थियो। अहिले कति गरिब छ, गरिबलाई नै सबैले मदत गर्छन्। हरेक कुराको भिक्षा मागिरहन्छ। पहिला त यहाँबाट धेरै अनाज जान्थ्यो। अहिले गरिब बनेको छ, त्यसैले रिटर्न सर्भिस भइरहेको छ। जे लिएर गएका थिए त्यो उधारो फिर्ता मिलिरहेको छ। कृष्ण र क्रिश्चियन राशि एउटै छ। क्रिश्चियनले नै भारतलाई हप गरेका हुन्। अब फेरि ड्रामा अनुसार उनीहरू आपसमा लड्छन्, मख्खन तिमी बच्चाहरूलाई मिल्छ। यस्तो होइन– कृष्णको मुखमा मख्खन थियो। यो त शास्त्रहरूमा लेखिदिएका छन्। सारा दुनियाँ कृष्णको हातमा आउँछ। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– हामी विश्वको मालिक बन्छौं त्यसैले तिमीलाई कति खुशी हुनुपर्छ। तिम्रो कदम-कदममा पदम छ। केवल एक लक्ष्मी-नारायणको राज्य थिएन। डिनायस्टी नै थियो नि। यथा राजा-रानी तथा प्रजा– सबैको पाउमा पदम हुन्छ। त्यहाँ त अनगिन्ती पैसा हुन्छ। पैसाको लागि कुनै पाप आदि गर्दैनन्, अथाह धन हुन्छ। अल्लाह अवलदीनको खेल देखाउँछन् नि। अल्लाह अवलदीन अर्थात् जसले देवी-देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। सेकेण्डमा जीवनमुक्ति दिनुहुन्छ। सेकेण्डमा साक्षात्कार हुन्छ। अथाह सम्पत्ति (कारुनको खजाना) देखाउँछन्। मीराले कृष्णसँग साक्षात्कारमा नृत्य गर्दथिन्। त्यो थियो भक्तिमार्ग। यहाँ भक्तिमार्गको कुरा छैन। तिमीले त प्राक्टिकलमा गएर वैकुण्ठमा राज्य गर्छौ। भक्तिमार्गमा केवल साक्षात्कार हुन्छ। यस समयमा तिमी बच्चाहरूलाई लक्ष्य-उद्देश्यको साक्षात्कार हुन्छ, जानेका छौ हामी यो बन्छौं। बच्चाहरूले भुलिहाल्छन् त्यसैले ब्याज दिइन्छ। अहिले हामी बेहदका बाबाको बच्चा बनेका छौं। कति खुशी हुनुपर्छ। यो त घरी-घरी निश्चय गर्नुपर्छ। तर माया विपक्षमा छ त्यसैले त्यो खुशी पनि उडिहाल्छ। बाबालाई याद गर्दै रह्यो भने नशा रहन्छ– बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउनु हुन्छ। फेरि मायाले भुलाइदिन्छ अनि केही न केही विकर्म हुन पुग्छ। तिमी बच्चाहरूलाई स्मृति आएको छ– हामीले ८४ जन्म लिएका छौं, अरू कसैले ८४ जन्म लिदैनन्। यो पनि सम्झनु छ– जति हामीले याद गर्छौं त्यति उच्च पद पाउँछौं र फेरि आफू समान पनि बनाउनु छ, प्रजा बनाउनु छ। च्यारिटी बिगिन्स एट होम। तीर्थहरूमा पनि पहिला आफैं जान्छन् फेरि मित्र सम्बन्धीहरूलाई पनि सँगै लिएर जान्छन्। त्यसैले तिमीले पनि सबैलाई प्यारले सम्झाऊ। सबैले बुझ्ने छैनन्। एउटै घरमा पिताले बुझ्छन्, बच्चाले बुझ्दैन। माता-पिताले जतिसुकै बच्चाहरूलाई पुरानो दुनियाँसँग दिल नलगाऊ भनून् फेरि पनि मान्दैनन्। हैरान पार्छन्। जो यहाँको कुलको हो उसैले आएर सम्झन्छ। हेर यस धर्मको स्थापना कसरी हुन्छ। अरू धर्मको कलमी लाग्दैन। उनीहरू त माथिबाट आउँछन्। उनीहरूका अनुयायी पनि आइरहन्छन्। बाबाले त स्थापना गर्नुहुन्छ र फेरि सबैलाई पावन बनाएर लैजानुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई सद्गुरुलिबरेटर भनिन्छ। सच्चा गुरु एउटै हुनुहुन्छ। मनुष्यले कहिल्यै पनि कसैको सद्गति गर्दैनन्। सद्गति दाता हुनुहुन्छ नै एक, उहाँलाई नै सद्गुरु भनिन्छ। भारतवर्षलाई सचखण्ड पनि उहाँले बनाउनु हुन्छ। रावणले झुटखण्ड बनाइदिन्छ। बाबाको लागि पनि झूटो र देवताहरूको लागि पनि झूटो भनिदिन्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ– हियर नो इभिल... यसलाई भनिन्छ वेश्यालय। सत्ययुग हो शिवालय। मनुष्यले कहाँ सम्झन्छन् र। उनीहरू त आफ्नै मतमा चल्छन्। कति लडाईं-झगडा चलिरहन्छ। बच्चाले आमालाई, पतिले स्त्रीलाई मार्न बेर लाउँदैनन्। एक-अर्कालाई काट्छन्। बच्चाले देख्छ पिताको पासमा धन धेरै छ, दिदैन भने मार्न पनि बेर लाउँदैन। कस्तो फोहोरी दुनियाँ छ। अहिले तिमी के बनिरहेका छौ। यो तिम्रो लक्ष्य-उद्देश्य खडा छ। तिमीले त केवल भन्थ्यौ– हे पतित-पावन! आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। यस्तो कहाँ भन्थ्यौ– विश्वको मालिक बनाउनुहोस्। परमपिता परमात्माले त स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ भने हामी स्वर्गमा किन हुँदैनौं? फेरि रावणले तिमीलाई नर्कवासी बनाउँछ। कल्पको आयु लाखौं वर्ष भन्नाले भुलेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी स्वर्गको मालिक थियौ। अब फेरि चक्कर लगाएर नर्कको मालिक बनेका छौ। अहिले बाबाले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु हुन्छ। भन्नुहुन्छ, प्यारा आत्मा बच्चाहरू बाबालाई याद गर्यौ भने तिमी तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्छौ। तमोप्रधान बन्नमा आधाकल्प लागेको छ, अझ सारा कल्प नै भनौं किनकि कला त कम हुँदै जान्छ। यस समयमा कुनै कला छैन। भन्छन् म निर्गुणमा कुनै गुण छैन, यसको अर्थ कति स्पष्ट छ। यहाँ फेरि निर्गुण बालकको संस्था पनि छ। बालकहरूमा कुनै गुण हुँदैन। नत्र बालकलाई महात्मा भन्दा पनि उच्च भनिन्छ, उनीहरूलाई विकारको बारेमा पनि थाहा हुँदैन। महात्माहरूलाई त विकारको बारेमा थाहा हुन्छ त्यसैले कति गलत बोल्छन्। मायाले बिल्कुलै झुटो बनाइदिन्छ। गीता पढ्छन् पनि, भन्छन् भगवानुवाच– काम महाशत्रु हो, यसले आदि-मध्य-अन्त्य दु:ख दिन्छ फेरि पनि पवित्र बन्नमा कति विघ्न पार्छन्। बच्चाले विवाह गर्दैन भने कति रिसाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी बच्चाहरू श्रीमतमा चल्नु छ। जसलाई फूल बन्नु छैन, उसलाई जतिसुकै सम्झाए पनि मान्दैन। यदि बच्चाहरूले हामी विवाह गर्दैनौ भन्छन् भने माता-पिताले कति अत्याचार गर्छन्।
बाबा भन्नुहुन्छ– जब ज्ञान यज्ञ रच्छु तब अनेक प्रकारका विघ्न पर्छन्। तीन पाइला पृथ्वी पनि दिदैनन्। तिमी केवल बाबाको मतमा याद गरेर पावन बन्छौ, अरू कुनै कष्ट छैन। केवल आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। जसरी तिमी आत्माहरू यस शरीरमा अवतरित भएका छौ त्यसैगरी बाबा पनि अवतरित हुनुहुन्छ। फेरि कछुवा अवतार, माछा अवतार कसरी हुन सक्नुहुन्छ! कति गाली गर्छन्! भन्छन् कण-कणमा भगवान हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– मेरो र देवताहरूको ग्लानि गर्छन्। मलाई आउनु पर्छ, आएर तिमी बच्चाहरूलाई फेरि मैले वर्सा दिन्छु, रावणले श्राप दिन्छ। यो खेल हो। कोही श्रीमतमा चल्दैनन् भने सम्झिइन्छ यिनको तकदिर त्यति उच्च छैन। तकदिरवालाले सबेरै-सबेरै उठेर बाबालाई याद गर्छन्, बाबासँग कुराकानी गर्छन्। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरेमा विकर्म विनाश हुन्छ। खुशीको पारा पनि चढ्छ। जो सम्मान सहित पास हुन्छन् उनीहरू नै राजाईको लायक बन्न सक्छन्। केवल एक लक्ष्मी-नारायणले राज्य गर्दैनन्। डिनायस्टी हुन्छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी कति स्वच्छ बुद्धि बन्छौ। यसलाई भनिन्छ सत्सङ्ग। सत्सङ्ग एउटै छ, जहाँ बाबाले सच्चा-सच्चा ज्ञान दिएर सचखण्डको मालिक बनाउनु हुन्छ। कल्पको संगममा नै सत्यको सङ्ग मिल्छ। स्वर्गमा कुनै प्रकारको पनि सत्सङ्ग हुँदैन।
अहिले तिमी हौ रूहानी सेलभेशन आर्मी। तिमीले विश्वको बेडा पार गर्छौ। तिमीलाई मुक्त गर्ने, श्रीमत दिने बाबा हुनुहुन्छ। तिम्रो महिमा धेरै महान् छ। बाबाको महिमा, भारतवर्षको महिमा अपरम्पार छ। तिमी बच्चाहरूको पनि महिमा अपरम्पार छ। तिमी ब्रह्माण्डको पनि र विश्वको पनि मालिक बन्छौ। म त केवल ब्रह्माण्डको मालिक हुँ। तिम्रो पूजा पनि डबल हुन्छ। म त देवता बन्दिनँ जो डबल पूजा होस्। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार सम्झन्छन्– खुशीमा आएर पुरुषार्थ गर्छन्। पढाइमा कति फरक छ। सत्ययुगमा लक्ष्मी-नारायणको राज्य चल्छ। त्यहाँ मन्त्री हुँदैनन्। लक्ष्मी-नारायण जसलाई भगवान-भगवती भनिन्छ उनले के मन्त्रीको राय लिन्छन् होला र! जब पतित राजाहरू बन्छन् तब फेरि मन्त्री आदि राख्छन्। अहिले त छ प्रजाको प्रजामाथि राज्य। तिमी बच्चाहरूलाई यस पुरानो दुनियाँसँग वैराग्य छ। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान केवल रूहानी बाबाले सिकाउनु हुन्छ अरू कसैले सिकाउन सक्दैन। बाबा नै पतित-पावन सर्वका सदगति दाता हुनुहुन्छ। अच्छा!
१) बाबाको यादको साथ-साथै आफू समान बनाउने सेवा पनि गर्नु छ। च्यारिटी बिगिन्स एट होम.... सबैलाई प्यारले सम्झाउनु छ।
२) यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैरागी बन्नु छ। हियर नो इभिल, सी नो इभिल...। हामी बेहदका बाबाका बच्चा हौं, उहाँले हामीलाई अथाह सम्पत्ति (कारुनको खजाना) दिनुहुन्छ, यसै खुशीमा रहनु छ।
एक सेकेन्डको बाजी द्वारा सारा कल्पको तकदिर बनाउने श्रेष्ठ तकदिरवान भव
यस संगमको समयलाई वरदान मिलेको छ– जे चाह्यो, जस्तो चाह्यो, जति चाह्यो त्यति भाग्य बनाउन सक्छौ किनकि भाग्य विधाता बाबाले तकदिर बनाउने चाबी बच्चाहरूको हातमा दिनु भएको छ। लास्टमा आएका भए पनि फास्ट गएर फस्ट आउन सक्छौ। केवल सेवाको विस्तारमा स्वयंको स्थिति सेकेन्डमा सार स्वरूप बनाउने अभ्यास गर। निर्देशन मिल्नासाथ एक सेकेन्डमा मास्टर बीज बन, समय नलागोस्। यो एक सेकेन्डको बाजीले सारा कल्पको तकदिर बनाउन सक्छौ।
डबल सेवाद्वारा शक्तिशाली वायुमण्डल बनायौ भने प्रकृति दासी बन्छ।